Sara kicidda waa miraha koowaad: Nolosha adigaa leh - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Surah Ar-Ra’d (Surah 13-Onkod) waxay sharraxaysaa loolan guud ama dhaleeceyn ka timaadda gaalada
Haddaad yaabtana waxaa Yaaba Hadalkoodii Ahaa ma Markaan noqonno Carro yaa Markaas Abuur Cusub (Nala abuuri) Kuwaasi waa kuwa Luquntooda la Yeelay Katiinado waana kuwo Naarta Ehelkeeda ah Kuna Dhex waari.waxay dheheen kuwii gaaloobay maxaa loogu soo Dejin waayey korkiisa Aayad xagga Eebihiis ka timid, adugu waxaad uun tahay Dige cid kastana waxay leedahay Hanuuniye
Suuradda Ar-Ra’d 13: 5,7
Waxay ku timaadaa laba qaybood. Gaalada ku jirta suuradda Ar-ra’d aayadda 5aad waxay weydiinaysaa in sarakicidu weligeed dhici doonto. Aragtidooda, mar haddii aysan hore u dhicin, ma dhici doonto mustaqbalka. Markaas bay weydiiyaan sababta aan calaamad mucjiso ah loo siin si loo xaqiijiyo in sarakiciddu dhici doonto. Dareen dhab ah waxay leeyihiin, “Caddee!”.
Surah al-Furqaan (Surah 25-Sharuud) waxay muujinaysaa isla caqabaddan la siiyay wax yar ka duwan.
Way Tageen Gaaladu Magaaladii lagu soo Daadiyey Roob Xun (Dhagax Cadaab) Miyeyna Arkeyn, waxayse Ahaayeen kuwaan Rajaynayn (ka yaabayn) soo kulmin.Hadday ku Arkaan Gaaladu waxay kaa yeeshaan Jees Jees, iyagoo (Dhihi) ma kanaa kan Eebe Soo Bixiyey Isagoo Rasuul ah
Suuradda al-Furqaan 25: 40-41
Ma jirto cabsi laga qabo sarakicidda soo socota, ama nebiga. Waxay dalbanayaan in la tuso sarakicidda. Sidoo kale suuradda al-Furqaan waxay muujinaysaa sida Eebbe u arko gaalada.
Suuradda al-Furqaan 25: 3
Suuradda al-Furqaan waxay daaha ka qaadaysaa in dadku inta badan qaataan ilaahyo been ah. Sidee qofku u garan karaa waxa ilaaha beenta ah ka yimid Runta? Aayaddu waxay bixisaa jawaabta. Ilaahyada beenta ah ma ‘xakamayn karaan geerida ama nolosha iyo sarakicidda’. Si loo xakameeyo sarakicidda – taas oo kala saarta beenta iyo runta.
Hadday caqabaddu tahay mid gaaladu siisay Alle iyo rasuulladiisa si loo caddeeyo waxa laga cabsado wixii la iska indho -tiri karo, ama haddii digniinta xagga Eebbe ka timid kuwa gaalada ah inay caabudaan runta ee aanay ahayn kuwa beenta ah, usha qiyaasta waa isku mid- sarakicidda.
sarakiciddu waxay u baahan tahay Maamul iyo awoodaugu dambaysa. Nebiyadii Ibraahiim, Muusa , Dawud iyo Mohamed – waaweyn in kastoo ay ahaayeen – kama soo sarakicin dhimashada. Raggii ugu caqliga badan –Socrates, Einstein, Newton, iyo Suleiman – midna ma leh. Ma jiro boqor ka taliya carshi kasta, oo ay ku jiraan Giriiggii, Roomaankii, Byzantine, Umayyad, Cabaasiyiin, Mamuluke iyo Boqortooyadii Cusmaaniyiinta, oo geerida ka adkaaday oo soo noolaaday.
Qiyaamaha waa Midhaha Koowaad:
Waa caqabadda ugu dambaysa.tani waa caqabadda Ciise Masiix doortay inuu wajaho.
Wuxuu gaaray guushiisa ka hor waaberigii Axaddii. Guushii uu ka gaaray dhimashada waaberigii waxay ii ahayd guul aniga iyo adigaba. Mar dambe uma baahnid in la nagu haysto maxaabiistii dunidan. Sida ay codsato Surah al-Falaq (Surah 113-The Morning)
Suuradda al-Falaq 113: 1-3
Halkan waxaan ku eegi doonnaa sida waaberigaas gaarka ah loogu sii sheegay boqollaal sano ka hor xafladda toreed ee midhaha ugu horreeya, iyo sida Sayidka waaberigu nooga samatabbixiyo xumaanta dunidan.
Ciise Masiix iyo Ciidaha Tawreedka
Waxaan si taxaddar leh ula soconnay dhacdooyinka maalinlaha ah ee Ciise Masiix sida ku qoran Injiilka todobaadkii ogu ogu dambeeyay.. dhamaadkii Toddobaadka maalintii Ciida Kormaridda Yahuudda xurmeysan ayaa iskutallaabta lagu qodbay. maalintii Kormaridda, oo ahayd ciid Yuhuudda xurmaysan. Kadibna wuxuu ku nastay dhimashadii Sabtidii, maalintii 7aad ee Quduuska ee toddobaadka. Maalmahan Quduuska ah ayaa Eebbe u dejiyey waqti hore Nebi Muuse Tawreedka. Waxaan halkan ka akhrinay tilmaamahaas:
ilowgii Ilaah samada iyo dhulkuu abuuray.
Laawiyiintii 23: 1-5
Miyaanay ahayn wax la yaab leh in iskutallaabta iyo nasashada Ciise Masiix labadaba ay isku beegmeen laba ciidood oo Quduus ah oo la qoray 1500 sano ka hor sida ku cad jadwalka?
Maxay tani u tahay? Jawaabtu way na wada gaadhaysaa, xataa sida aan hadda maalin walba isu salaano.
Dhimashada Ciise Masiix waxay dhacday maalintii allabariga Kormaridda (Maalinta 6aad) nasashadiisuna waxay dhacday maalintii Sabtida (Maalinta 7)
Iskudubaridkan u dhexeeya Ciise iyo ciidaha Tawreedka ayaa sii socta. Akhrinta Tauraat ee kor ku xusan waxay wax ka qabatay labada ciidood ee hore. Iiddii xigay waxaa la odhan jiray ‘midhihii ugu horreeyey’ oo Tawreedku wuxuu bixiyay tilmaamtan ku saabsanwaa.
Laawiyiintii 23: 9-11,14
Sidaas daraaddeed ‘maalintii sabtida ka dambaysay’ ee Kormaridda waxay ahayd maalin quduus ah ee saddexaad. Sannad walba maanta oo kale ayaa wadaadka sare wuxuu soo galaa macbudka quduuska ah oo wuxuu Rabbiga hortiisa ku ruxruxaayay beergooyska midhihii ugu horreeyey. Tani waxay muujisay bilowga nolol cusub dhimashadii jiilaalka, iyadoo la sugayo goosashada badan si dadku wax u cunaan oo ay u qancaan.
Kani wuxuu ahaa isla maalintii Sabtida ka dib markii Ciise uu ku nastay geeridii, Axaddii toddobaadka cusub ee Nisan 16. Injil wuxuu diiwaangeliyaa dhacdooyin la yaab leh isla maalintaas oo Wadaadka Sare macbudka galay si uu u bixiyo miraha ugu horreeya ‘nolosha cusub. Waa kan diiwaanka:
Ciise Masiix ayaa ka soo sara kacay kuwii dhintay
aalintii ugu horraysay ee toddobaadka, goortii waagii beryayay, ayay xabaashii yimaadeen, iyagoo wada dhirtii udgoonayd oo ay diyaargareeyeen.
10 Waxay ahaayeen Maryantii reer Magdala, iyo Yo’anna, iyo Maryan oo ahayd Yacquub hooyadii; dumarkii kalena oo la jiray ayaa waxaas rasuulladii u sheegay.
13 Laba ka mid ah iyaga waxay maalintaas qudheeda ku socdeen tuulo la odhan jiray Emma’us, tan Yeruusaalem u jirtay lixdan istaadiyon.
18 Midkood oo Kale’obas la odhan jiray, ayaa u jawaabay oo ku yidhi, Ma adigoo keliya oo Yeruusaalem deggan oo aan ogayn wixii ayaamahan meeshaas ka dhacay?
21 Laakiin waxaannu rajaynaynay inuu yahay kan Israa’iil soo furan lahaa, laakiin waxaas oo dhan weliba maanta waa u maalintii saddexaad markii ay waxaas oo dhammi dhaceen.
23 Goortii ay meydkiisii waayeen ayay yimaadeen iyagoo leh, Waxaannu weliba aragnay muuqad malaa’igo kuwa yidhi, Wuu nool yahay.
Luukoos 24: 1-48
Guusha Ciise Masiix
Maalintaas Quduuska ah ee ‘Midhihii Koowaad’ wuxuu gaaray guul weyn oo cadowgiisa iyo saaxiibbadiis aysan rumaysan inay suurtogal tahay – wuxuu ku soo noqday nolosha isagoo ka guulaystay geerida. Sida Injilku sharxayo:
54 Markii kan qudhmayaa uu gashado qudhunla’aanta, oo kan dhimanayaana uu gashado dhimashola’aanta, markaas hadalka qorani wuu noqon doonaa ee ah, Dhimashadii waxaa liqday libtii.
1 Korintos 15: 54-56
Laakiin tani ma ahayn uun guul nebiga. Waxa kale oo ay guul u tahay aniga iyo adiga, oo lagu dammaanad qaaday waqtigii la galay iidkii Midhaha Koowaad. Injilku wuxuu u sharxayaa sidan:
24 Markaasaa dhammaadku iman doonaa, markuu isagu boqortooyada u dhiibi doono Ilaaha Aabbaha ah, markuu baabbi’iyo madax walba iyo amar walba iyo xoog walba dabadeed.
26 Oo cadaawaha ugu dambeeya ee la baabbi’in doonaa waa dhimasho
1 Korintos 15: 20-26
Nabiga ayaa la sara kiciyey isla maalintii iiddii Midhaha Koowaad si aan u ogaanno inaan ka qayb qaadan karno isla sarakicidda dhimashada. Sida iiddii Midhaha Koowaad ay ahayd bixinta nolol cusub iyada oo la filaayo in goosasho weyn la sameeyo guga dambe, Injilku wuxuu inoo sheegayaa in sara Kicidda Ciise Masiix ay ahayd ‘midhihii ugu horreeyey’ ee sarakicidda iyadoo la filaayo sarakicidda dambe ee dhammaan ‘kuwa isaga leh’. Tawreedka iyo Quraanka ayaa sharxaya in geeridu ku timid Aadan. Injilku wuxuu inoo sheegayaa in si isku mid ah ay nolosha sarakicidu uga timaaddo Ciise Masiix. Isagu waa midhihii ugu horreeyey ee nolosha cusub ee dhammaanteen nalagu martiqaaday inaan ka qaybgalno.
Easter: U Dabaaldega sarakicidda Axaddaas
Maanta sarakicidii Ciise Masiix waxaa inta badan loogu yeeraa Easter, Axadda uu soo kacayna inta badan waxaa lagu xusuustaa Axadda Easter. Laakiin erayadan ayaa la adeegsaday boqollaal sano ka dib. Erayada gaarka ah muhiim ma aha. Waxa muhiim ah sarakicidda Ciise oo dhammaystirtay Iiddii Midhihii Koowaad oo bilaabantay boqollaal sano ka hor xilligii Nebi Muuse, oo waa mid micna u leh aniga iyo adiga.
Tan waxaa loo arkaa Axadda toddobaadka cusub ee Jadwalka:
Ciise Masiix wuxuu ka soo kacay Geerida Maalinta Midhaha Koowaad – nolol cusub oo dhimasho ah ayaa la idiin soo bandhigay aniga iyo aniga.
Jimco Wanaagsan’ ayaa ka jawaabay
Tani waxay sidoo kale ka jawaabatay su’aasheena ku saabsan ‘Jimco Wanaagsan’. Sida Injilku sharxayo:
9 Laakiin waxaynu aragnaa Ciise, kan wax yar malaa’igaha laga hoosaysiiyey, isagoo xanuunka dhimashada aawadiis ammaan iyo murwad taaj loogu geliyey inuu nimcada Ilaah dhimashada ugu dhadhamiyo qof walba.
Cibraaniyada 2: 9
Markii uu ‘dhadhamiyay geerida’ Jimcihii Wanaagsanaa wuxuu sidaas u yeelay adiga, aniga iyo ‘qof walba’. Jimcaha Wanaagsan ayaa magaceeda leh maxaa yeelay way noo fiicnyad. Markii uu ka soo kacay iidii Midhaha Koowaad wuxuu qof walba siiyaa nolol cusub.
Sarakicidda iyo Nabadda Ciise ee Qur’aanka
In kasta oo si yar loo tafatiray, haddana Qur’aanku wuxuu ku tilmaamay sarakicidda Ciise Masiix inay tahay mid ka mid ah saddexda maalmood ee ugu muhiimsan.
Suuradda Maryam ayaa sidan ku qoran tahay: Ciise Masiix ayaa yidhi]
Suuradda Maryam 19:33
Injilku wuxuu kaloo xooga saaraa dhalashada Ciise Masiix, dhimashadiisa iyo sarakiciddiisa. Maaddaama sarakiciddiisu ay tahay ‘midhihii ugu horreeyey’, nabaddii Ciisea ku sugnayd sarakiciddiisa ayaa hadda diyaar u ah aniga iyo adiga.Ciise Masiix wuxuu muujiyey tan markii uu salaamay xertiisii ​​goor dambe maalintii sarakicitaankiisa:
Yooxanaa 20: 19-22
Sarakicidda Ciise Masiix waa la tixgeliyaa .
Ciise Masiix isagoo maalmo badanka soo noolaaday dhimasha wuxuu is tusay xertii,dhacdooyinkan oo dhan ee injiilka ku qoran ayaa halkan looga hadlay.laakiin xitaa waa inaan ogaanaa muuqiisii ogu horeeyay ee xertiisa umuuqday;
... waxay ula muuqatay wax aan micno lahayn
Nebiga laftiisu waa inuu:
Haddana mar dambe:
Sideen ku hubsan karnaa in tani dhab ahaantii tahay qorshihii Eebbe iyo sida tooska ah ee uu nooga noolayn doono dhimashada? Eebbe oo keliya ayaa garan kara mustaqbalka, sidaa darteed Calaamadaha ayaa soo shaac -baxay boqollaal sano ka hor iyada oo loo sii marayo Nabiyadii Tawreed iyo Zabur, oo uu dhammaystiray Ciise Masiix waxaa loo qoray inay na siiyaan hubin:
In nalaga wargeliyo su’aashan muhiimka ah ee allabariga iyo sarakicidda Ciise Masiix oo la, xiriirinta afar maqaal oo kala duwan ayaa la heli karaa:
1-Tani waxay dib u eegaysaa Calaamadaha lagu sheegay Tawreedka Muuse oo tilmaamaya Ciise Masiix.
2- Tani waxay dib u eegaysaa Calaamadaha ‘Nabiyada iyo Sabuurrada’. Labadan maqaal ayaa noo oggolaanaya inaan annaga qudheena xukumi karno inay run ahaantii ku qoran tahay “Masiixu wuu xanuunsan doonaa oo maalinta saddexaad ayuu sara kici doonaa” (Luukos 24:46).
3- Tani waxay naga caawineysaa inaan fahanno sida loo helo hadiyaddan nolosha sarakicidda ee Ciise Masiix.
4- Tani waxay ka hadlaysaa waxoogaa jahawareer ah oo ku saabsan iskutallaabta lagu qodbay Ciise al Masih, iyadoo dib loo eegayo waxa Quraanka Quduuska ahi ka sheegayo.
Salaanta caadada ah ee Muslimiintu hadda isu fidiyaan (salam caalaykum –Nabadgelyo iyo korkaaga ja ahaato) ayaa Ciise Masiix hore u isticmaalay si uu isugu xiro sarakicitaankiisa iyo nabada hadda la ina siiyay. Waa inaan xusuusanno ballanqaadkan nebiga mar walba oo aan maqalno ama niraahno salaantan, oo aan ka fikirno hadiyadda Ruuxa Quduuska ah oo iyaduna hadda diyaar noo ah.
Tags:EasterIsa al masih oo dhintayIsa al Masih sarakiciddanoolo cusub oo Isa al Masihsalam wa alykumsarakiciddasarakicidda Isa al Masihsurah maryamWaa maxay Easter.wuu sara kacay